Oduu injifannoo wbo zoonii lixaa keessaa socho’uu irraa. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu injifannoo wbo zoonii lixaa keessaa socho’uu irraa.
Oduu injifannoo wbo zoonii lixaa keessaa socho’uu irraa. Guyyaa har’aa Onkolooleessa 1/2019
Gootichi waraana bilisummaa oromoo WBO’N waraana gabroonfataa mootummaa itoophiyaa waliin ganama barii irra jalqabee hanga ammaatti lola geggeesseen Godina Qellem Wallaggaa #Garjeedaa keessatti kaampii waraanaa diinaa humna jabaa qabu itti lixxuun waraana ishee waliin barbadeessee meeshaalee waraanaa diinaa
Fi wantoota xixiqqoo immoo gubee ishee barbadeessera. Injifannoon WBO waliin itti fufa!
Ful 30/2019 jechuun Guyyaa kaleessaa#Oduu #Injifannootiin. Godina Qellem Wallaggaa Magaalaa Garjeedaatti gootichi waraana bilisummaa oromoo WBOn eda halkan Sa’aatii 4:00 irratti erga jalqabee hanga ammaatti falma hadhooftuu geggeesseen haleellaa iddoo sadiitti saroota wayyaanee irratti raawwateen akka ajaa’ibaatti loltoota diinaa daaraa botoroo godheera/baayyee ishee du’aan adabee jira. yeroo ammaa kanas magaalaan garjeedaa dirree waraanaa taatee jirti.Injifanoon kan WBOti!!!
Waraanni Raayyaa ittisaa hedduun Wareegama Guddaa kafalaa jirti. Hedduun isaanis Carraa argatan hunda fayyadamuun harka mootummaa keessaa Miliqaa jiru. Kan Qabsoo Wboti makachuuf fedha qabanis lakkoofsan hin qaban/ jechuun baayyeedha jechuudha.Wbon injifannoo boonsaa galmeessisaa jira. Itti muddi Leencakoo ….Dhugaankee mullaachaa jira.
Raayyaan Ittisa Biyyaa mana uummata gubuu ittuma Fife. (SQ,Onkolooleessa 01,2019)
Godina qellem wallaggaa aanaa Gidaamii Ganda laaloo Garee keessatti waraanni Koloneel Abiyi manneen hawaasaa sagalii fi bataskaana madiyaanaalamii laaloo tokko dabalatee gaafa 30/9/2019 guyyaa kaleessaa barbadeessee jira.tartiibaan maqaan namoota manni jalaa barbada’ee:-
1 Sheek kamaladdiin, mana lama guban
3, Beekkataa Cuungee,
4, Mitikkuu Geenoo,
5, Shuumaa Galataa,
6, Daargee maammoo,
7, Qabeessaa Galataa,yoo ta’an, mana tokko maatii waliin waan gubaniif namoonni naannicha waan hin jirreef adda baasuu hin dandeenye! Oromoon lixa oromiyaa waraana mootummaattin dhumaa jira!
Odessa Gumaa Guddaa irraa.
Dubbii/dhimma Irreecha #finffinnee Waliin Wal qabatu kana irrati akka Xiyyeeffattan jenna.
Hirmaattoonni ayyaana Irreecha irrati argamuuf daandii fagoo imaltanii achitti argamtan Of eeggannoon isin gochuu qabdan baayyee murteessaadha.
1. Nyaata bakka hin beekne/bakka shakkitanii fayyadamuu irraa of qusachuu
2. bishaan high landin yeroo ammaa kana gabaa irra oolee jiru hedduun isaa mark kan hin qabnedha. Fakkeenyaaf Qadaaddoo isaa irrati plastikan qabsiifame kan gurguramaa ture amma akkasumaan gurguramaa jira. Kun maalif akka ta’e ammaaf waan qulqulleeffanne hin qabnu. Haa ta’u iyyuu malee yeroo bishaan bitattan qadaaddoo isaa sirriiti ilaalaa. Nafxanyaan aarii guddaa keessa waan jirtuuf shira nurrati xaxuu waan dandeessuuf.
3. Qeerroon keenya wal qooddanii/Qofa Qofaa hin deeminaa, sababni isaas Ilmaan Nafxanyaa Yeroo qeerroo Oromoo argan Garaan isaanii waan gubatuuf Waan godhan hin beekan waan ta’eef yaalii garaagaraa geggeesuu nii danda’u. Kanaaf Tokkummaadhaan Sosso’aa.
4. Sakata’iinsa folleef Qaama nageenyaa kamiin Geggeefamu hundaaf dursa kennaa. Sababni isaas Baayyina Uummataa guyyaa gaafa sana dhufu irraa kan ka’e qaamni shira yaadu waan hin dhibneef Sakatta’a kana deeggaruun Nageenya ayyaana kanaaf gaarii nii ta’a.
5. Ergaa Dabarfachuun nurra jiru mara bifa tasgabba’aa fi nageenya ayyaana kanaa hin booresineen dabarfachuu nii dandeenya.
6. Midiyaan Uummataaf Hojjetu kam iyyuu ergaa Uummatni keenya dabarfachuu barbaadu Osoo irraa hin haqisiin osoo itti hin dabaliin gurra Uummataatin ga’uu qaba. Yoo kana hin goone garuu fudhatammummaan inni uummata Oromoo biratti qabu yeroo kanaan booda jirutti akka gadi bu’aa deemu dursinee beeksisuu barbaanna.
7. Uummatni Keenya bakka jiru hunda irraa walitti dhufu hundi Uuffata Aadaa isaa uffatee Alaaba Oromumaa isaa Calaqisiisu Qabateee Ayyaana kana irrati aargamuu qaba.
8. Ayyaanni kun kan Uummata Oromooti malee kan mootummaa biyya bulchaa jiruu / kan paartii kamiin iyyuu bakka bu’u miti. Kanaaf Qaamni Qophiii kana qindeessus haa ta’u qaamni haasaa taasisu kam iyyuu haasaa polotikaa fi dubii hamilee Qabsa’otaatti bu’u dubbachuu irraa of qusachuu danda’u qaba.
9. Abbotiin Gadaa Haasaa taasisan keessati dhimma siyaasaa kam irraa walaba ta’uun Akka sirna Gadaatti Waan Gadaan keenya eeyyamu qofa irratti xiyyeeffachuun Ergaa Uummata Oromoo fayyaduufi Tokkummaa Ilmaan Oromoo jabeessu fi Ijaaru irrati akka xiyyeeffatan dhaamsa keenya dabarfanna.
10. Qeerroon Oromoo Guutummaa Oromiyaa irraa achitti walitti Qabame aadaa isaa kabajuuf Waaqa Uumaa isaa galateeffachuu
Egeree isaa dabarsee harka waaqaatti kennachuuf waan ta’eef Tokkummaadhaan ayyaana kana kabajannee Ergaa Dabarfachuu qabnus dabarffannee ayyaana keenya kabajannee kan nagaan mana keenyatti gallu Rabbi nuuf haa godhu. QBOn Marii Keenya Guyyaa booriitti qabanne Sa’a jeenneti wal haa quunnamnu.
” Gumaa Guddaa ”
Waanti Hafe hedduudha isaaf ammoo Walitti deebina.
Hirmaattoni Ayyaana kana irrati ayyaaneffachuuf qophii irra jirtan Share Gochuun Nu hordofaa.
Yaada Dabalataa yoo qabaattan itti dabaluu nii dandeessu.
“Rabbi Deemsa milkii nuf haa taasisu.”